Esi mee ka ihe ILS ọdịda na FSX na PA380
ajụjụ Esi mee ka ihe ILS ọdịda na FSX na PA380
1 afọ 10 ọnwa gara aga #480 by JanneAir15
Nnọọ! N'ihi ya, m ga-achọ ịmata otú ka ILS ọdịda na FSX na Project Airbus A380. M na-ama ma-esi mee ka ILS ọdịda na ndị ọzọ ụgbọ elu ma, n'ihi na Project Airbus kokpiiti bụ a bit dị iche iche m na-nnọọ n'aka. M agbalị ime ka ILS ọdịda na na ụgbọelu ma ọ bụghị na-arụ ọrụ. Site n'ụzọ m nọ virtual kokpiiti. Enwere dị iche iche mkpọchi? Na ụgbọelu bụ Air France A380 VC site na saịtị a. Biko nyere m aka na nke a.
1 afọ 10 ọnwa gara aga #483 by Gh0stRider203
Oge ike page: 0.546 sekọnd